द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | सेप्टेम्बर 5, 2020 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
के तपाइँ एक व्यापार सिर्जना गर्न वा यसलाई कब्जा गर्न चाहानुहुन्छ, यो एक SAS हो, एक SASU, एक SARL वा अन्य, तपाइँको हालको काम राख्दै? नोट गर्नुहोस् कि कुनै पनि कर्मचारीसँग व्यवसायको सिर्जना वा अधिग्रहणको लागि बिदा लिने अधिकार छ। थप रूपमा, केहि प्रावधानहरू ध्यानमा राख्नु पर्छ। यहाँ सेट अप गर्न वा ब्यापार लिने बिदाको अनुरोधका लागि निम्न प्रक्रियाहरू छन्। तपाईंलाई अनुरोधको नमूना पत्र पनि दिइनेछ।
व्यवसाय सिर्जनाको लागि भुक्तान बिदाको लागि अनुरोध कसरी अगाडि बढाउने?
जब तपाइँ एक कम्पनी को लागी काम गर्नुहुन्छ, तपाइँसँग एक व्यवसाय सुरु गर्ने योजना हुन सक्छ। यद्यपि यसलाई तपाइँको पक्षबाट केहि खाली समय चाहिन्छ। कुरा के हो भने, तपाईं आफ्नो वर्तमान काम छोड्न चाहनुहुन्न, तर तपाईं आफ्नो प्रोजेक्ट पूरा गर्न समय चाहनुहुन्छ। त्यसोभए थाहा पाउनुहोस् कि कम्पनी सिर्जना गर्न कुनै पनि कर्मचारीले छुट्टीबाट फाइदा लिन सक्दछ।
लेखको साथ अनुसार, L3142-105 अगस्त °, २०१9को कानून n ° २०१-2016-१०1088 को लेख by द्वारा संशोधन गरिएको लेबर कोड को, तपाईं प्रभावी रूपमा आफ्नो नियोक्ताबाट बिदा अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईंको अनुरोध केहि शर्तहरूको अधीनमा हुनेछ।
यस बिदाबाट लाभ लिनको लागि तपाईले सब भन्दा पहिले एक उही कम्पनीमा वा उही समूहमा २ बर्षको जेष्ठता हुनुपर्दछ र गत years बर्षमा यसबाट फाइदा लिनु भएको छैन। तपाईंसँग एक परियोजनाको रूपमा एक व्यवसाय सिर्जना हुनुपर्दछ जुन तपाईं हाल काम गरिरहनुभएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धामा छैन।
यद्यपि तपाईले निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छबिदा तपाईलाई चाहिन्छ प्रदान गरियो कि यो १ बर्ष भन्दा बढी हुँदैन। तपाइँ यसलाई एक बर्षको लागि नविकरण गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईले यस अवधिको अवधिमा तलब पाउनुहुने छैन, जबसम्म तपाईंले पार्ट-टाइम कामको लागि रोज्नु हुँदैन। त्योले भन्यो, तपाईले आफ्नो भुक्तान गरेको छुट्टी ब्यालेन्सको अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
रिड पत्र टेम्पलेट: तपाइँको कर्मचारी बचत अनलक
व्यापारको सिर्जना वा टेकभरको लागि छुट्टी अनुरोध गर्न वा CCRE सरलीकृत गर्न, तपाईंले आफ्नो रोजगारदाता कम्तिमा कम्तिमा2महिना बिदाको बिदाको मिति भन्दा अघि सूचित गर्नुपर्नेछ, यसको अवधि उल्लेख गर्न बिर्सनु बिना। नोट गर्नुहोस्, तथापि, तपाईंको छुट्टी प्राप्त गर्न अन्तिम म्याद र शर्तहरू कम्पनी भित्र सामूहिक सम्झौताद्वारा सेट गरिएको छ।
सीईएमआर प्राप्त गर्न, तपाईंले त्यसपछि चिठ्ठी लेख्नुपर्नेछ बिदा अनुरोध गर्न व्यवसाय सेट अप गर्न। तपाईले यसलाई तपाईको रोजगारदातालाई पठाउन अनिवार्य छ पोष्टकर्ताले रसिदको पालनाको साथ पत्राचार गरेर, वा इ-मेल मार्फत। तपाईंको पत्रले तपाईंको अनुरोधको सटीक उद्देश्य, तपाईंको बिदाको मिति साथै छुट्टिको अवधि उल्लेख गर्दछ।
एक पटक तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको अनुरोध प्राप्त गरे पछि तिनीहरूसँग तपाईंलाई जवाफ दिन सूचित गर्न days० दिनहरू हुन्छन्। यद्यपि उसले तपाईको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्न सक्छ यदि तपाईले आवश्यक सर्तहरू पूरा गर्नुभएको छैन भने। यदि तपाईंको प्रस्थान कम्पनी को विकास मा एक परिणाम छ भने इनकार पनि हुन सक्छ। यस अवस्थामा, तपाईंसँग १ trib दिन पछि औद्योगिक ट्रिब्यूनलमा गुनासो दर्ता गर्न अस्वीकार भयो भने यदि तपाईं यो निर्णय स्वीकार गर्नुहुन्न।
थप रूपमा, तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको अनुरोध स्वीकार गरेमा घटनाहरूमा उनीहरूले तपाईंको सम्झौताको जानकारी 30० दिन भित्रमा दिनुपर्नेछ। यस समय सीमा पार गर्नुहोला र तपाईको रोजगारदाताको प्रकट नभएको खण्डमा तपाईको अनुरोधलाई अनुमोदन गरिएको मानिनेछ। जे होस्, तपाईंको प्रस्थान तपाईंको प्रस्थानको लागि अनुरोध गरेको मितिबाट अधिकतम months महिनाको लागि स्थगित गर्न सकिन्छ। यो विशेष रूपमा यस्तो अवस्थामा जहाँ यो एक समान अवधिमा गरिन्छ अन्य कामदारहरूको जस्तो। यो अभ्यास व्यवसाय को सहज ढंगले चलिरहेको सुनिश्चित गर्नका लागि अपनाईन्छ।
रिड एक सफल पेशेवर इमेल धेरै मापदण्ड को विषय हो
बिदा पछि के हुन्छ?
सबै भन्दा पहिले, तपाईं आफ्नो रोजगार सम्झौता समाप्त गर्ने वा काम जारी गर्न को बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यसैले, तपाईले आफ्नो रोजगारदातालाई बिदा समाप्त हुनु भन्दा कम्तिमा months महिना अघि काममा फर्कन चाहेको तपाईलाई सूचित गर्नुपर्दछ। पहिलो केसको लागि, तपाइँ तपाइँको सम्झौताको सूचना बिना रद्द गर्न सक्नुहुन्छ, तर सूचनाको बदले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेर।
तपाईंले कम्पनीमा काम गर्न जारी छनौट गर्नुभएको घटनामा, तपाईं आफ्नो पुरानो स्थिति वा यस्तै स्थितिमा फर्कन सक्नुहुनेछ यदि आवश्यक छ भने। तपाईंको सुविधाहरू तसर्थ तपाईंको छुट्टीमा प्रस्थान अघि जस्तै हुनेछ। यदि आवश्यक भएमा आफैंलाई पुनर्वास गर्न प्रशिक्षणबाट पनि तपाईं लाभ लिन सक्नुहुन्छ।
कसरी व्यवसाय सिर्जनाको लागि बिदाको पत्र लेख्ने?
तपाईंको CEMR अनुरोधले तपाईंको प्रस्थान मिति, तपाईंको बिदाको अपेक्षित अवधि र तपाईंको प्रोजेक्टको सटीक प्रकृति उल्लेख गर्नुपर्दछ। तपाईं तलका टेम्प्लेटहरू बिदा अनुरोधका लागि र कार्य अनुरोधमा फर्काउनका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
एक CEMR अनुरोध को लागी
विषय: व्यवसाय सिर्जनाको लागि छुट्टीमा प्रस्थानको लागि अनुरोध
तपाईंको कम्पनीमा एक कर्मचारीको रूपमा, [मिति] देखि, म हाल [स्थिति] को स्थिति ओगट्छु। यद्यपि लेबर कोडको लेख एल 3142१105२-१०-XNUMX with को आधारमा, म व्यापार सिर्जनाको लागि छुट्टीबाट फाइदा लिन सक्षम हुन चाहन्छु, जसको गतिविधि [तपाईंको प्रोजेक्ट निर्दिष्ट गर्नुहोस्] मा आधारित हुनेछ।
यसैले म [प्रस्थान मिति] बाट [वापसीको मिति] अनुपस्थित हुनेछु, त्यसैले [अवधिको दिनहरूको संख्या निर्दिष्ट गर्नुहोस्] एक अवधिको लागि, यदि तपाईं यसलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने।
तपाईंबाट निर्णयको लागि पेन्डि,, कृपया म्याडम, सर, मेरो उच्च विचारको आश्वासन स्वीकार्नुहोस्।
टेक-ब्याक अनुरोधको मामलामा
विषय: पुनर्स्थापनाको लागि अनुरोध
मँ [छुट्टी मिति] देखि एक व्यापार सुरु गर्न छुट्टीमा छु।
म तपाईं लाई तपाईंको कम्पनीमा मेरो पुरानो काम पुनः सुरु गर्न चाहन्छु भन्ने मेरो अवगतिको बारेमा सूचित गर्दछु, जुन श्रम कोडको लेख एल 3142१85२--XNUMX मा आधिकारिक छ। यदि, तथापि, मेरो स्थिति अब उपलब्ध छैन, म समान स्थिति लिन चाहन्छु।
मेरो बिदाको अन्त [[फिर्ती मिति]] को लागि तालिकाबद्ध गरिएको छ र म त्यस दिनदेखि उपस्थित हुनेछु।
कृपया महोदय, महोदय, मेरो उच्च विचारको आश्वासनमा।
डाउनलोड गर्नुहोस् "CCRE-1.docx बाट एक अनुरोधको लागि"	Our une-Kb - times 1 पटक डाउनलोड - अन-डिमांडि-डे-सीसीआरई -१.डॉक्स - डालो
डाउनलोड गर्नुहोस् "in-the-the-ਕੇਸ-of-a-रिकभरी-अनुरोध -ddx"	In-the-a-ਕੇਸ-of-a रिकभरी-अनुरोध-१.docx - १०० पटक डाउनलोड गरियो - १ K Kb
ब्यापार स्टार्ट-अप को लागी छोड्नुहोस्, नि: शुल्क आवेदन पत्र टेम्प्लेट जनवरी 8th, 2022Tranquillus
अघिल्लोव्यक्तिगत प्रशिक्षण खाता: सबै कुरा तपाईंले थाहा पाउनु पर्छ
निम्नसुरक्षित स्वैच्छिक गतिशीलता को लागी एक अनुरोध पत्र बनाउनुहोस्